सम्झना राईले कसरी सम्हाल्दैछिन् कोरियन प्रहरी कमाण्ड ? हेर्नुहोस् (भिडियो) सहित — KhabarTweet
सम्झना राईले कसरी सम्हाल्दैछिन् कोरियन प्रहरी कमाण्ड ? हेर्नुहोस् (भिडियो) सहित
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०४, २०७७ समय: ८:००:०८
सोल– दक्षिण कोरियाको प्रहरी अधिकृतमा एकमात्र नेपाली मूलकी महिला कार्यरतछिन् । भोजपुरको दुर्गम गाउँमा जन्मिएकी सम्झना रार्ई प्रहरीको बाह्र विभागमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विभागको अधिकृत पदमा २ बर्षदेखि कार्यरत रहेकी हुन् ।
सन् २०१० मा नेपाल भ्रमण गएका कोरियन युवासँग प्रेममा परेकी राई त्यसै वर्ष भिजिट भिषामा कोरिया प्रवेश गरेकी थिइन् ।भिजिट भिषामा प्रवेश गरेसँगै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी राईले छल्नाम्दोस्थित छुसन विश्वविद्यालयमा प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी संकायमा भर्ना भएर अध्ययन पनि पुरा गरेकी छिन् ।
सन् २०१५ मा छुसन विश्वविद्यालयमा अध्ययन पुरा गरेकी उनले यही महिना शारिरिक, स्वास्थ्य र त्यहाँको प्रशासनसम्बन्धी परिक्षामा एकपछि अर्को उत्तीर्ण गरेकी हुन् ।
परीक्षामा उत्तीर्ण भएसँगै आफ्नो समाचार कोरियन सञ्चारमाध्यममा आएपछि थाहा पाएकी राईले पुलिस अफिसर बन्ने सपना पुरा भएको बताइन् । नेपालमा प्रहरी बन्ने सपना भए पनि उचाईँ, उमेर र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आफू बञ्चित भएको राईले बताइन् ।
राईले आफू प्रहरी अधिकृत भएपछि कोरियामा काम, अध्ययन र व्यावसायमा रहेका नेपालीलाई आइपर्ने कानूनी जटिलतामा सहयोग गर्दै आएको बताएकीछिन्। भाषाका कारण नेपालीहरु धेरै समस्यामा परेका बताएकी राईले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कानुनी सहयोग गर्दै आईरहेको बताएकीछिन् ।
राईले भर्खरै सार्वजानिक भएको स्टोरी टेलरमा आँफ्नो जन्मदेखि हाल सम्म भोगेका विभिद विषयहरुमा नेपाली भाषमै व्यक्त गरेकीछिन् । हेर्नुहोस् भिडियोः